Roger Mitton ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းသို့ လာရောက်လေ့ မရှိကြပေ။ သို့သော် ချင်းပြည်နယ်မှ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ရှုခင်းများကို လူပိုမိုသိလာစေရန် မြှင့်တင်လာမှုများကြောင့် ထိုအချက်မှာ ပြောင်းလဲလာနိုင်ပေသည်။ ဂျာရတ် ဒေါင်းနင်း ရေးသားသည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့သို့ သင်သွားရောက်လည်ပတ်ပါက သင်တွေ့ရှိနိုင်သော ခရီးသွားအေးဂျင့်သည် ဒေသခံ ခရစ်ယန် တရားဟောဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပေသည်။.
ANP ၏ ရခိုင်အရေးဆွေးနွေးလိုမှုအပေါ် လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော်တို့ သီးခြားစီခွင့်ပြုပေးခဲ့
လတ်တလောမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့ ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ (ANP)ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ တပ်မတော်တို့က တစ်ရက်တည်းမှာတင် သီးခြားစီ ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
H1N1 အတွက် အရေးပေါ်အကူအညီများကို အိန္ဒိယက ဒုတိယအကြိမ် ပေးပို့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် H1N1 ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါအတွက် အရေးပေါ်အကူအညီများအား အိန္ဒိယအစိုးရက ဒုတိယအကြိမ် ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်မြို၊ အိန္ဒိယသံရုံးမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လာရောက်မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန်အတွက် သမ္မတဦးထင်ကျော်က ဖိတ်ကြားထားသည်ဟုလည်း အဆိုပါ သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူရန် ကနဦးအဆင့် ဆွေးနွေးနေ
တရုတ်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူရေးအတွက် ကနဦးအဆင့် ဆွေးနွေးနေသည်ဟု တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်နှင့် ၎င်းတို့ တွေ့ရှိခဲ့သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား အမျိုးသား လျှပ်စစ်ကွန်ယက်များအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ရန် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်ဟုလည်း ရိုက်တာက သြဂုတ်.
ကိုဆွေဝင်းကို အမှုဖွင့်သည့် ကျော်မျိုးရွှေကို မန်းသပိတ်တွင် ပါဝင်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီး
ဦးကျော်မျိုးရွှေသည် အာမခံမရသည့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းကို မန္တလေး အိုးဘိုထောင်သို့ ပို့ဆောင်တော့မည်ဖြစ်သည်။